LEGO Avengers Endgame မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego Spider-Manအောက်တိုဘာလအတွက် No Way Home အစီအစဉ်များလွှဲပြောင်းပေးသည်
01 / 10 / 2021 26 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 229 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, 76237 Sanctuary II ကို, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို, Sets အသစ်များ, အောက်တိုဘာလ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
Spider-ManNo Way Home သည်လအနည်းငယ်သာလိုတော့သဖြင့်သင်ခေါင်းစားရနိုင်သည်art ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ
Lego အသစ် Marvel Eternals အစုံသည် LEGO.com တွင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်
01 / 10 / 2021 01 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 168 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, 76237 Sanctuary II ကို, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို, Sets အသစ်များ, အောက်တိုဘာလ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
အောက်တိုဘာလသည်ဒီမှာနှင့် LEGO အသစ်များစွာရှိသည် Marvel အတွဲအားလုံးသည်အခန်း၏အခြေခံများဖြစ်သည် Marvel
23 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 528 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Captain America, Captain America နှင့် Winter Soldier, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, hulk, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel's Avengers Infinity စစ်ပွဲ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier
T'Challa ရဲ့အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုပြန်ဖန်တီးမလဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ…? LEGO ၌
18 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 295 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76020 Knowhere Escape မစ်ရှင်, 76079 Ravager တိုက်ခိုက်မှု, 76080, 76080 Ayesha ရဲ့လက်စားချေ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုတ်ခဲ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Heist, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Nebula, Peter Quill, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ယွန်ဒူး
ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? Star-Lord နှင့်သူ့အဖွဲ့၏အခြားဗားရှင်းတစ်ခုမိတ်ဆက်၊ ငါတို့မှာရှိတယ်
LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Marvel 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard
14 / 07 / 2021 14 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 284 Views စာ0မှတ်ချက် 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, .ရာဝတီ, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, ပထမဦးစွာမျှော်, Korg, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Miek, အဆိုပါ Infinity Saga, Thor, YouTube ကို
လာမယ့် LEGO ကို Thor-ward ကိုကြည့်ပါ Marvel 2021 Bro Thor New Asgard အတွက် ၇၆၂၀၀ အတွက်ပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်
LEGO အသစ်ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲ Marvel အနီရောင်စုန်းမင်အသေးငယ်ခြင်း
13 / 06 / 2021 14 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 358 Views စာ0မှတ်ချက် 76031 အဆိုပါ Hulk Buster Smash, 76051 စူပါသူရဲကောင်းလေဆိပ်တိုက်ပွဲ, 76178 နေ့စဉ် Bugle, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါ Infinity Saga, ဝမ် Maximoff, WandaVision, YouTube ကို
Lego Marvel 76192 Avengers: Endgame Final Battle သည်တည်ဆောက်သူများအားထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းကို ပို၍ သစ္စာရှိစွာအပန်းဖြေရန်ပြုလုပ်ပေးသည် Marvel ပန်ကာ
Relive Avengers: LEGO ကိုပထမဆုံးသုံးသပ်ချက်တွင် Endgame Marvel အဆိုပါ Infinity Saga အစုံ
24 / 05 / 2021 25 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 530 Views စာ0မှတ်ချက် 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avangers: အဆုံးသတ်ဂိမ်း, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, အုတ်ဖို, Captain America, ကပ္ပတိန် Marvel, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Thanos, အဆိုပါ Infinity Saga, Thor
အသစ် LEGO Marvel Infinity Saga ဇာတ်ကား၊ ၇၆၁၉၂ Avengers: Endgame Final Battle ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးအချိန်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။
21 / 05 / 2021 24 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 495 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, အုတ်ဖို, ပထမဦးစွာမျှော်, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Shuri, အဆိုပါ Infinity Saga
Lego Marvel 76125 သံက Man Armor ပြန်လည်သုံးသပ်
22 / 04 / 2019 01 / 08 / 2020 ရော့ Paton 3419 Views စာ0မှတ်ချက် 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, Lego Avengers Endgame, Lego သံက Man, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ
76125 Iron Man Hall of Armor သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းအယူအဆဖြစ်သည်